Yaa dilay Walaalkey Shidane Abuukar Abrone???!!!. | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Goobtu waa Xeradii Ciidamadda Kanada ee “AirBorne” ee Soomaaliya UNISOM 2, Baladweyne 16/3/ 1993. Dilaagu waa Corporal Clayton Matchee oo ahaa Askari Kanadiyaan ah oo jirdil iyo garaacid nafta uga qaaday wiil yar oo Soomaali ah Wallalkeey/walaalkaa, laguna Magacaabi jiray Shidane Abuukar Caroone Da’diisuna aheyd 16 Sanno jir AUN.
Sidee wax u dheceen?.
March 16, 1993, ayaa Dhamme Michael Sox waxa uu arkay Shidane Abukar Carone oo uga dhuumanayo Musqul ah kuwa la qaadi karo “Portable Toilet” oo ku dhax tiil Xero hore ey Ciidanka Mareykanku uga guureen oo ka baxsan Xerada Ciidamada Kanada ee Magaalada Baladweyne.
Muddo kadib , Trooper Kyle Brown ayaa la wareegay xilkii waardiyaha ,waxa uu ku bilaabay in uu qaniino Shidane, Asgarigii uu xilka kala waragayay ayaa yiri: Waxaad doonto ku samey Shidane laakin ha nagu dilin. Hase yeeshee, Brown ayaa yiri: waan dilayaa. (Brown replied that he wanted to “kill this fucker”). Sida Markhaati uu maxkamada ka hor cadeeyay.
Boland, Matchee iyo Matt McKay ayaa bilaabay in Sigaar ay ku gubaan Cirbaha iyo Qoobabka Shidane ,iyo in ey ku garaacaan Xariga telephonka iyo Biro. Brown oo markii hore fiirsananay ayaa bilaabay in uu ka soo qayb galo Garaacidda kana qaaday 16 Sawir, iyada oo Afka shidane Qoray lagu kala furayo, iyo Pte. David oo Pistolad madaxa uga hayo Shidane. ( F.S: 2,3 & 4aad) Ka dibna waxaa u soo aaday Cpl. Giasson waxaa la tusiyay Shidane oo si xun u dhiigay Asgarigiina waa ka tagay markaa ayuu yiri: “in Canada we cannot do that, and here they let us do it”.
Corporal MacDonald, oo habeenkaa heeganka lahaa ayaa waxa uu amray Sgt. Major Mills in uu ka yareeyo Ciqaabta Shidane. Waxa uuna yiri: “Now the Black man would fear the Indian as he did the white man”, bacdamaa isgu uu ka soo jeedo qowmiyada “Red Indian, Cali beeysteen”. Mardambe MacDonald ayaa dibada u soo baxay si uu u arko xaaladii ugu dambeysay ee Shidane , waxa uuna arkay Matchee oo wajiga caroone ul bir ah uga garaacayo ,waxa uuna ugu war bixiyay habeenkaa Sgt. Perry Gresty in xaalada Maxaabiista somalidu guud ahaan ey wanaagsan tahay isaga oo ka been sheegayo.